Distrikan’i Fandriana Vaky ny ady eo amin’ireo mpanohana ny kandidam-panjakana
Fifidianana ben`ny tanàna Hotanterahina ny volana septambra 2019
Efa miomana hanao fivoriana hiatrehana ny fifidianana ben`ny tanàna sy mpanolotsaina ny CENI, amin`ny herinandro ambony, aorian`ny famoahana ny vokatra feno tsy ofisialy tamin`ny fifidianana solombavambahoaka farany teo.
CENI Fitoriana 71 no voaray hatreto
Ny sabotsy 15 jona izao no hamoaka voka-pifidianana feno vonjimaika ny CENI etsy amin`ny foibe Alarobia.
Fitsarana an’i Mahery Lanto Manandafy Amin’ny 20 jona no hivoaka ny didy
Taorian’ny fanadihadian’ny zandary, tonga eny amin’ny Fitsarana ny raharaha mahakasika ny ampamoaka nataon’i Mahery Lanto Manandafy tao amin’ny tambajotran-tserasera facebook ny 7 mey, izay mahakasika an’Atoa Holijaona Rabaonarijaona “Emergence Madagascar”.
Hosoka tamin’ny fifidianana Kandida maro nitondra porofo sy nitory
Nanao rodobe nametraka fitoriana tapany voalohany teny amin'ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana (HCC) teny Ambohidahy ireo kandida maro sy ny solontena na ny mpiara-dia aminy omaly maraina manoloana ny lesoka sy hosoka na tsy fanarahan-dalàna tsapa sy hitan’izy ireo.
Fitsinjaram-pahefana tena izy “Kobaka am-bava fotsiny”
“Na inona na inona no ataon`ny minisitra na ataon`ny fanjakana dia mikombona fotsiny ireo depiote lany miaraka amin`ny fitondrana”, hoy Atoa Rodin Rakotomanjato.
Ramboasalama Emilien “Tompondakan`ny tsy fanarahan-dalàna isika Malagasy”
Tokony hohamafisana ny fanabeazana eo anivon`ny fiarahamonina momba ny fanajana fitsipika sy fahaiza-miaina, hoy Atoa Ramboasalama Emilien, kandida depioten’ny TIM teny amin’ny boriborintany fahefatra.
Fikambanana VOT “Tsy misy zavatra mandeha intsony eto amin’ny firenena”
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny Vondron’olon-tsotra tarihin-dRtoa Sarah Zoe. Nambarany fa tsy misy zavatra mandeha intsony eto amin’ny firenena, indrindra taorian’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo.
Ny zoma lasa teo no natao famotorana ny tale jeneraly ny fananan-tany teo aloha Atoa Hasimpirenena Rasolomampionona, ary naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora, izy ity moa dia kandida ho solombavambahoaka any amin’ny Distrika Fandriana ary efa nahatafapetraka soamantsara ny antontan-taratasy rehetra, natolotry ny vovonana IRD, izay miaraka amin’ny Filoha Andry Rajoelina na kandidam-panjakana hoy ny maro.
Nanomboka ny sabotsy teo anefa dia misavorovo ireo mpanohana sy miara-dia amin’ny Filoha, izay nanolotra ity kandida ity , satria dia fafaham-baraka no azo eny anivon’ny fiaraha-monina, ary tsy manaiky intsony izy ireo ny hanohana ity kandida izay natolotry ny vovonana IRD ity. Vitsy sisa no manaiky hanohana azy ary izay no niteraka ny ady satria manalabaraka ny Filoham-pirenena sy ny mponina ao Fandriana, hoy izy ireo izao zavatra miseho izao, ary manaratsy endrika ny fitondrana. Mbola tena ao anatiny disadisa tanteraka moa ireo olona sy antoko politika anatin’ny vovonana IRD ao Fandriana amin’izao fotoana izao ary miandry izay ho fanapahan-kevitra raisin’ireo tompon’andraikitra avy aty amin’ny foibe izy ireo. Araka ny tsiliantsofina heno dia te hanohana kandida hafa izy ireo amin’ity fifidianana ity.